Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FCF & MT si Nigeria & ụwa | TAA
Rep Kazaure: PDP na-akwado ndị na-azụ anụ ụlọ
Biafra: IPOB dọrọ aka na nti ochichi gọọmentị gọọmentị megide ụkọchukwu Senator Abaribe, onye bụbu Minista Chidoka
Onye nnọchiteanya Germany na-adọ ndị òtù ahụ aka ná ntị megide mpụga iwu na-akwadoghị
Onye ndu Shi'ite Ibrahim El-Zakzaky, nwunye, ndi ozo bu ndi ebubo igbu mmadu
Home Tags FCF & MT
FCF & MT
Ndị pirates na-ezu ohi ụgbọ mmiri Japan nyere Nigeria
Nchoputa egosiputawo na ndi oru ndi ozo bu ndi oru ugbo na ndi oru nyocha nke Gaa na Federal College of Fisheries and Marine Technology (FCF & MT) nyere na Lagos.
Dika ndi mmadu bu ndi agha bu ndi a na-eche na ndi Fulani bu ndi oru ugbo na-aga n'ihu na-egbu ndi amaala na ndi ozo na-emeghi ihe obula, otu onye otu ulo nke Muhammad Kazaure, ekwuola na ndi mmadu Democratic Party (PDP) bu n'agbata igbu mmadu.
Ndị Indigenous People of Biafra (IPOB) na Thursday, dọrọ aka ná ntị na gọọmentị Federal nke Nigeria na-ezere ụdị ụdị ọgwụgwọ ọ bụla megide onye isi oche nke Senator Enyinnaya Abribe na onye bụbu onye ozi nke ụgbọelu, Osita Chidoka, maka ọrụ ha na-eme ka a tọhapụ ha nke ndi ndu ya, Nnamdi Kanu.
Onye nnochite anya Germany na Nigeria, Bernhard Schlagheck, na Abuja na Thursday dọrọ ndị òtù ahụ aka na ihe ize ndụ nke njem mgbochi na-akwadoghị na Europe, na-agwa ndị ntorobịa ka ha zere omume ahụ.
Gọọmentị Kaduna State ebubo onye ndú nke Alakụba Islam nke Naijiria, nke a makwaara dị ka Shi'ites, Sheikh Ibrahim El Zakzaky, na nwunye ya, Zeenah, na mmadụ abụọ ndị nwere mmejọ dị iche iche tinyere igbu ọchụ nke onye agha.
Bill Cosby nwere ike ikpe ikpe niile na-ekpe ikpe ọnwụ
Bill Cosby mara ikpe na Thursday nke mwakpo mmekọahụ site na United States jury, nke chọpụtara na ọ bụ ikpe na ọgwụ ọjọọ na-emegbu onye ọrụ mahadum 14 afọ gara aga na mbụ mara amara ikpe nke oge #MeToo.
Everton ekweghị ịhapụ ahịa Ademola Lookman
Everton ekweghị ịhapụ ire Ademola Lookman mgbe RB Leipzig gosipụtara na ha nwere mmasị ịkwado nwata ahụ.
Dangote Cement Plc ga-atụle ahịa London na afọ abụọ sochirinụ dị ka onye na-emepụta ihe owuwu nke Africa chọrọ ego maka mgbasa.
Onye ahia na ebubo nke ịzụta ọgwụ ngwaahịa
A na-eweta onye ahịa 44, bụ Olumide Afolabi, na Monday, n'ihu Ụlọikpe Magistrate nke Ikeja na-ekwu na ebubo nke ngwaahịa ọgwụgwọ bara N1.5 nde.
Hichapụ Alli: Tottenham 'gbadaa' site na ịhapụ ụzọ isi nke ihu
Otu onye agbata obi na Tottenham, Dele Alli, gwara Spurs ka anyị "gbadaa" na Manchester United 2-1 mgbe o nwesịrị isi mmalite Saturday na FA Cup.
FSB: Mbinye ego mbinye akwụkwọ ụmụ akwụkwọ tupu Senate
Director, Federal Scholarship Board, Mrs. Fatima Ahmad, kwuru na ụmụ akwụkwọ ahụ kwadoro ụgwọ tupu Senate achọọ inweta ohere maka agụmakwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ Naijiria.